Fijoroana ho Vavolombelona: Ahoana no nahatsapa ny batisan'ny Fanahy Masina | Apg29
Fijoroana ho Vavolombelona: Ahoana no nahatsapa ny batisan'ny Fanahy Masina
Tadidiko izy nilaza hoe: " 'ny Fanahy batisa mba hahazoana hery."
Tsy mahafinaritra ny ho feno ny Fanahy Masina. Mahatsapa ny Fanahy ho toy ny loharanom-baovao izay miboiboika ao anatiny, loharanom tondra-angovo sy ny fifaliana.
Fony aho mbola mpino vaovao, dia nitsidika trano fiangonana fivoriana amin'ny tsy lavitra ny tanàna an-trano. Ny Fivoriambe dia niantso ny tanora mba hanana fivoriana evanjelistra tao anatin'ny herinandro. Nilalao ny angorodao, nihira sy nitory. Tamin'ny iray amin'ireo fivoriana, ary dia niresaka momba ny batisa ao amin'ny Fanahy Masina. Tadidiko izy nilaza hoe: " 'ny Fanahy batisa mba hahazoana hery."
Ny fijoroana ho vavolombelona evanjelistra midika fa nanana faniriana mafy ny hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. Nieritreritra aho hoe: "fahefana dia izay ilaiko mba handresena ny nikôtinina faniriany."
Rehefa tonga tao an-trano aho taorian'ny fivoriana, dia maizina ny andro, fa ny tamin'ny volana Oktobra. Rehefa tonga ny fotoana ho an'ny ny alina ny sisa, dia nipetraka teo ambony seza eo ny ray aman-dreniko. Ny ray aman-dreny sy ny iray tam-po teo amin'ny efi-trano hafa, dia irery aho tany an-dakozia. Ny ambainy, dia tsy mba mialoha izay nampifandraisina mivantana ny varavarankely, fa hitako any an-alina.
Amin'ny faniriana lehibe ao amin'ny vata anankiray izy, dia nanontaniako indray, ary indray - angamba noho ny antsasaky ny ora iray: "Ry Jesosy, manao batisa ahy ao amin'ny Fanahy Masina, ka manana ny hery." Dia nanopy ny masony amin'ny lanitra amin'ny alina, izay Miravaka rahona. Tampoka teo nizara ny rahona, ary noho ny fialan-tsiny ihany eny amin'ny rahona dia tena hazavana. Ary dia nisy izany mamirapiratra sy tsara tarehy tao amin'ny efitrano.
Taorian'ny labozia, dia nandre nimonomonona, izay nitombo tsikelikely mandra-nitsoka toy ny rivo-doza mavesatra.
Raha ny feon'ny tafio-drivotra dia ny firongatry ny hery lehibe amin'ny alalan'ny tenako, avy loha ny tongotra. Ny Fanahy Masina no nahazo ahy, ary nahatsapa toy ny tsindry tao am-bata. I Tena matahotra ny traikefa mahery vaika. Tsy mino aho fa mba toy izany aho eo amin'ny fiainako natahotra.
Fa rehefa ho tonga akaiky Andriamanitra. Ny fanatrehany masina dia midika fa ianao no raiki-tahotra. Fa rehefa afaka kelikely, dia aoka ny tahotra ary feno fiadanana mahatalanjona. Tsy miteny aho amin'ny fiteny tsy fantatra àry, Nefa ny zava tatỳ aoriana.